भारतमा कोरोनाबाट मर्नेको संख्या २० पुग्यो, औषधि बनाउन अनुमति माग - Aarthiknews
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड १९को संक्रमणबाट मृत्यस हुनेको सख्या २० जना पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छन । भारतमा हालसम्म संक्रमितको कुल संख्या ८ सय ३० जना पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको औषधिमा अनुसन्धान पनि भइरहेका छन। यसैबीच, भारतको बेंगलुरुमा एक चिकित्सकले कोरोना भाइरस औषधि बनाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारबाट अनुमति पनि मागेका छन्।
बेंगलुरुमा आधारित एन्कोलोजिस्ट डा. विशाल रावका अनुसार नयाँ औषधि केही औषधिहरू मिलाएर तयार गरिएको दावी गरेका हुन । उनले भने 'कि साइटोकाइन्सको सहयोगमा, मिश्रण तयार गर्न सकिन्छ जुन बिरामीहरूमा ईन्जेक्सन गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्दछ। यो अझै प्रारम्भिक स्थितिमा छ । हामीले सरकारबाट अनुमति मागेका छौं।'
डा. विशाल रावले भने, 'हामीले समीक्षाका लागि सरकारलाई पनि आवेदन दिएका छौं। मानव शरीर कोषहरू भाइरस विरुद्ध लड्न क्षमताका छन । कक्षहरूमा ईन्टरफेरोनहरू हुन्छन् जुन भाइरससँग लड्न मद्दत गर्दछ । जब बिरामी कोविड १९ लाई संक्रमित हुन्छन, यी कोशिकाहरूले यी ईन्टरफेरोनहरू छोड्दैनन, यसले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्दछ र भाइरसको प्रभाव बढाउँदछ।'
डा रावले थप वर्णन गरे 'हाम्रो अनुसन्धानमा, हामीले पत्ता लगायौं कि यी ईन्टरफेरोनहरू पनि कोरोना भाइरससँग लड्न मद्दत गर्दछन्। यसको लागि हामीले साइकोकिन्सको मिश्रण तैयार गरेका छौं कि उपचारका लागि कोरोना बिरामीको शरीरमा ईन्जेक्सन गर्न सकिन्छ। उनले भने कि यो खोप होईन र यसलाई कोरोनाबाट संक्रमित हुनबाट रोक्न सकिदैन।'